अब सञ्चय कोषको रकम कर्मचारी आफैले चाहेको बैंक खातामा राख्न सक्ने ! – Public Health Concern(PHC)
अब सञ्चय कोषको रकम कर्मचारी आफैले चाहेको बैंक खातामा राख्न सक्ने !
काठमाडौं, १० जेठ । आगामी बजेटले तलव वृद्धि हुने आशामा रहेका कर्मचारीहरुलाई बजेट अगाडि नै अर्को खुशीको खबर रहेको छ ।
अब सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता कर्मचारीहरुले एनसीएचएलमार्फत विद्युतीय भुक्तानी पाउने भएका छन् । नेपाल क्यिरिङ हाउस र सञ्चय कोषबीच भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भएपछि यो बाटो खुला भएको हो । तर, अहिले नै कार्यान्वयनमा भने जाने छैन् । विद्युतीय भुक्तानीको कार्यान्वयन साउन १ गतेबाट हुने गरी तयारी भइरहेको सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक जीवन कटवालले जानकारी दिएका छन् ।
पहिलो चरणमा भुक्तानी मात्र गर्ने भए पनि यसको प्रयोग पछि क्रमशः संकलन पनि विद्युतीयमार्फत नै हुने उनले बताएका छन् । कोष अहिले भुक्तानीको परीक्षणमा छ । परीक्षण सफल भएको अवस्थामा सञ्चय कोषबाट रकम संकलनमा पनि एनसिएचएलमार्फत नै गर्नेछ ।
सम्झौता अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले क्लियरिङ हाउसको एनसिएचएल आइपिएस र कनेक्ट आइपिएसमा पूर्णरुपमा इन्टिग्रेट गरी भुक्तानी कारोबार स्वचालित रुपमा गर्नेछन् । कोषले गर्ने भुक्तानीलाई लाभग्राहीको खातामा सोझै जम्मा गर्न सकिने छ । सञ्चयकर्ता वा संस्थाले कोषलाई बुझाउने सञ्चयकोष किस्ता आदिको भुक्तानी समेत अनलाइन वा कुनै पनि बैंक खाताबाट गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ ।
कोषमा साढे पाँच लाख सञ्चयकर्ता छन् । यसमा ३० हजार संस्था आवद्ध छन् । सञ्चयकोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रदानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।श्रोत
Tags: healthhealth infoKarmachari Sanchaya Koshpublic health updateSanchaya Kosh Nepal
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा २०२० लाई ‘नर्स र मिडवाइफ वर्ष’ घोषणा
DAAD Scholarships: Development-Related Postgraduate Courses in Germany.
Peter Drucker Challenge Essay Competition 2019